आफ्नो घर को स्थान अधिकतम प्रयोग गर्न इच्छा यसलाई भण्डारण कुराहरू आउँछ विशेष गरी जब, केवल प्राकृतिक छ। साँच्चै, पनि सबैभन्दा प्रबल नियमित रूपमा क्रम को प्रशंसक, सबै अनावश्यक को छुटकारा प्राप्त गर्न पहिचान समय, घर कम ठाउँ खाली बन्ने छ। स्थिति अपार्टमेन्ट को क्षेत्र जनसंख्याको ठूलो भाग प्रभावशाली सकिन्छ छ भन्ने तथ्यलाई exacerbated छ।
मात्र तरिका (ठूलो घर सार्दा छोटो) यो समस्या समाधान गर्न भण्डारणको लागि क्षेत्रहरु संख्या मा वृद्धि सहित परिसर को Ergonomics सुधार छ। दराज संग बेड - थप ठाउँ छैन cluttered कोठा वार्डरोब, दराज र समतल को चेस्ट बढाउनका एक महान अवसर। यो आफ्नै सान्त्वनाका खर्च र कोठा को सौंदर्य को गिरावट मा हासिल छैन थाहा राम्रो।
दराज संग बेड - तिनीहरूले के हुन्
यस्तो बेड को विचार - अन्तर्गत-बंक भण्डारण ठाउँ अस्तित्व। तर, यो विभिन्न तरिकामा बुझे छ। खाट मा दराज खाट को परिधि वरिपरि राखिएको वा केहि सानो क्षेत्र छ गर्न सकिन्छ। आफ्नो उचाइ पनि फरक हुन्छ।
मुख्य मतभेद यो ठाउँ पहुँच गर्न मात्र तरिका बताउन। बक्से हाडजोर्नी आधार तल स्थित एक उठाने संयन्त्र प्रयोग गरेर, (को छाती मा) त्याग दिन योग्य वा खुला हुन सक्छ। पहिलो विकल्प थप आर्थिक मानिन्छ। तथापि, यस प्रकारको ओछ्यान दराज संग थाहा मनमोहक छ कि केहि सुविधाहरू छन्।
पहिले, कोठा आफ्नो खोज को लागि पर्याप्त ठाउँ हुनुपर्छ। यसबाहेक, ठोस डबल बेड को चौडाई भनेर, फर्निचरहरू पर्खाल विरुद्ध राखिनेछ भने, तिनीहरूलाई वस्तुतः असम्भव हुनेछ प्रयोग, विपरीत दिशामा खोल्न दराज हुन सक्छ। दोस्रो, तिनीहरू, दुईवटा पङ्क्ति मा राखिएको गर्न सकिन्छ गर्दा हार्डवेयर को निर्माण मा प्रयोग नम्बर भण्डारण ठाउँ, को ड्रेसर दराज र केही आधारमा बुझे छ भने जो समाप्त उत्पादन लागत मा वृद्धि गर्न जान्छ, नाटकीय बढ्छ। तसर्थ, यस मामला मा दक्षता - एक नातेदार अवधि।
अन्तमा, यस दराज आफ्नो ठोस लोड संग पर्याप्त हार्ड खोल्नुहोस्। जो पनि केही असुविधा सिर्जना गर्छ।
दोस्रो विकल्प - दराज, अक्सर भित्री डिजाइन पत्रिका मा देख्न सकिन्छ फोटो जो संग बेड: सुसज्जित hoists संग मोडेल।
यो डिजाइन को लाभ धेरै हो:
योग्य स्पेस ठूलो रकम;
बक्समा कुनै पनि कुनामा गर्न उत्कृष्ट पहुँच, त्यसैले - सजिलो खोज कुराहरू आवश्यक;
बक्से खोल्ने लागि थप स्थान को लागि कुनै आवश्यक छैन।
को उचाल्नु गुणस्तर ध्यान निश्चित हुनुहोस्। यसलाई सुरक्षित, सुरक्षित माथि स्थिति बन्द र बिस्तारै कम हुनुपर्छ।
दराज संग बेड - बच्चाहरु र वयस्क लागि इष्टतम
स्पष्ट कुरा भण्डारण गर्न ठाउँ संग लाभ बेड। र तपाईं वयस्क र छोराछोरीको बेडरूम लागि मोडेल पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। बच्चाहरु को लागि बेड दराज संग मुख्य रूप प्रदर्शन गर्दै छन्। यो बुझ्ने छ। आफ्नो आकार अपेक्षाकृत सानो छ, त्यसैले यसलाई सबै भन्दा सस्तो र एकै समयमा सुविधाजनक विकल्प छ। किशोर ओछ्यानमा दराज संग नै सिद्धान्त द्वारा निर्मित वा उठाने संयन्त्र छ गर्न सकिन्छ। अक्सर यो maturing बच्चाहरुका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ जो आफ्नो उपस्थिति, मा निर्भर गर्दछ।
बेड, playpens - विशेषताहरु र वर्णन
मानक आकार बिस्तर टेबल
एक स्लाइड दराज कसरी चयन गर्ने?
कफी निर्माता Saeco HD 8763: सुविधा र लाभ
क्यूई, ताई ची, qigong
अर्ध-रत्नहरू: सूची र वर्णन
के फरक अभिमुखीकरण को कान मानिसहरू घायल
यो श्रृंखला "फारगो": समीक्षा। अभिनेता र भूमिकाको
युरोप मा रियल एस्टेट। अपार्टमेन्ट वा Jurmala (लाटविया) मा घर - एक उत्कृष्ट छनोट।
Pansy प्लान्ट प्रसार
विद्युत ताप संग अधोवस्त्र।
को "Sampo" एउटा ट्याक्सी कल कसरी? "Sampo": कल सेवा
इस्टोनियाली महिला नाम सूची। बालिका लागि सुन्दर इस्टोनियाली नाम